Xiriirka Galmudug iyo Buntilan oo meel fiican maraya (akhriso warbixin xiiso leh)
Home » WARARKA MAANTA » Xiriirka Galmudug iyo Buntilan oo meel fiican maraya (akhriso warbixin xiiso leh)	Xiriirka Galmudug iyo Buntilan oo meel fiican maraya (akhriso warbixin xiiso leh)
20/03/2017	605 Views Ka dib markii xal laga gaaray dagaallo dhowr jeer oo hore dhex maray maamullada Galmudug iyo Buntilan, ayaa waxaa hadda soo muuqanaya iskaashi iyo xiriir wanaagsan oo labada dhinac ka dhexeeya.
Warar naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in qeybta uu maamulka Galmudug kaga sugan yahay magaaladaas lagu qabtay koox burcad ah oo gaari ka soo dhacday dhinaca Buntilan, waxaana arrintaas loo arkay tallaabo lagu sii xoojinayo xiriirka labada dhinac.
Taliye-ku-xigeenka Booliska Galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in ay ciidamadoodu qabteen gaariga la soo dhacay iyo saddex nin oo raggii falka dhaca ah geystay ah, kuwaas oo isugu jiray laba ka soo jeedda deegaannada Buntilan iyo mid reer Galmudug ah.
Col. Cabdi Jaamac Xabeeb ayaa waxa uu intaas ku daray in labadii nin ee dhinaca Buntiland ka soo jeedday loo gacan-geliyay maamulkooda, ninkii reer Galmudug ahnaa ay iyagu xabsiga dhigeen.
Kooxdan la qabtay ayaa waxa ay ahaayeen burcad iska kaashada fulinta falal dhac iyo dhibaateyn kale ah, oo laga sameeyo Gaalkacyo iyo deegaannada ku dhaw ee ay labada maamul ka kala taliyaan.
Taliye-ku-xigeenka Booliska Galmudug ayaa ugu baaqay shacabka ku nool Gaalkacyo ee labada maamul kala taabacsan in ay si wadajir ah uga qeyb noqdaan howlaha lagu sugayo nabadgeliyada, oo looga hortagayo kooxaha dhaca iyo dhibaatooyinka kale geysta.
Previous: Mucaaradkii Xassan Sheekh oo ka shallaayay taageeridda Farmaajo (Xog culus)
Next: Dowladda Qadar oo maanta howl muhiima ka qabatay Muqdisho